अष्ट्रेलियामा कोरोना कहर, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसः दुई जनाको मृत्यु, कति पुगे संक्रमित ?
अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसः कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
यसरी ५ हजार अष्ट्रेलियन नागरिकहरुलाई राखियो क्वारेनटाइनमा
अष्ट्रेलियामा कोरोना फैलिरहेको बेला सरकारको यस्तो प्याकेज, कसले कति पाउँदै ?
‘फोब्र्स इन्डियाको टप १०० सेलिब्रेटी लिष्ट २०१८’को पहिलो नम्बरमा सलमान !
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान ‘सुल्तान’को नामले चर्चित छन् । सलमानले ‘फोब्र्स इन्डियाको टप १०० सेलिब्रेटी लिष्ट २०१८’ () मा लगातार तेस्रो पटक टप गरेका छन् । १ अक्टोवर २०१७ देखि गत ३० सेप्टेम्बरसम्ममा सलमानले फिल्म, टिभी शो र ब्राण्ड एडोर्समेन्टबाट कुल २५३.२५ करोड भारुको कमाई गरेका छन्, यसै कारण ‘फोब्र्स इन्डियाको टप १०० सेलिब्रेटी लिष्ट २०१८’को लिष्टमा तेस्रो पटक पनि सुल्तान बनेका हुन् ।
सिड्नीमा नेपाली युवाको निधन, शव नेपाल लैजान आर्थिक सहयोगको आह्वान
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा अध्यनरत नेपाली युवा मिलन तामाङको बुधबार साँझ मृत्यु भएको छ । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ७ का २० वर्षीय मिलन तामाङ अध्ययनका लागि भनेर दुई महिना अघि मात्रै अष्ट्रेलिया अाएका थिए ।
अष्ट्रेलियमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको निधन
एजेन्सी । अष्ट्रेलियमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको निधन भएको छ ।
बर्तमान सरकार जन विश्वास र जन चाहना अनुसार अघि बढीरहेको छ : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
सिड्नी । प्रवासी नेपाली एकता मंच अस्ट्रेलियाको आयोजनामा सिड्नीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र बरिष्ठ अधिवक्ता सुर्य ढुंगलसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सिड्नीको ग्रेभिलमा डिसेम्वर एक शनिवार भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बर्तमान सरकार जन विश्वास र जन चाहना अनुसार अघि बढीरहेको बताएका छन् ।